Annaga nagu saabsan - Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.
Dhererka dhexroorku wuxuu noqon karaa 200 mm ilaa 5000 mm.Wadista wax lagu dilo, waxaa jira sagaal (9) cabbir oo kala duwan laga heli karo 3 "ilaa 25" oo leh in ka badan 60 nooc si loo buuxiyo shuruudaha raadraaca caadiga ah iyo kuwa saxda ah labadaba.
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd , aasaasay on February 18, 2011. Wanda waa bixiye xal dilaaga ah xirfad leh wax dilaan iyo wadida dilaaga, isku dhafka R & D, design, wax soo saarka iyo adeegga.Shirkaddu waxay leedahay xoog farsamo oo xoog leh, awood wax soo saar xoog leh, qalab tijaabo ah oo dhammaystiran, oo awood u leh inay bixiso 4000 nooc oo wax lagu dilo iyo 1000 nooc oo darawalnimo ah bishii.Shirkaddu waxay heshay ISO9001:2015 iyo shahaadooyinka CCS.
Muuqaalka iyo sawirka kormeerka warshadda
Xuzhou Wanda ayaa si fiican u iibisa alaabada dalka waxayna u dhoofisay in ka badan 60 waddan iyo gobolo ay ku jiraan Maraykanka, Kanada, Jarmalka, Britain, Italy, India, South Korea, Russia, Singapore, Vietnam, Malaysia, iwm. ammaan sare oo ka timid macaamiisha gudaha iyo dibadda.Waxaannu ahayn alaab-qeybiye joogta ah oo deggan SANY, XCMG iyo Terex.
1.Wanda waxay leedahay shaqaale ka badan 230 qof, taas oo hubinaysa inay si degdeg ah u bixiso, iyada oo awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee ka badan 50,000pcs.
2.Our injineernimada waxay ku siin karaan xal habaysan sida waafaqsan shuruudahaaga oo la kaashanaya Jaamacadda Tsinghua, Jaamacadda Shiinaha ee Macdanta iyo Technology iyo Northwestern Polytechnical University on technology cilmi-baarista & horumarinta.
3. Kooxda iibka xooggan waxay badeecadda ka iibisaa in ka badan 60 waddan iyo gobollo, iyagoo kasbanaya ammaan sare oo joogto ah macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
4.Special injineerada iibka ka dib waxay bixiyaan jawaab degdeg ah 24 saacadood gudahood.